Ukuzingelwa kwezindebe eBotswana kuzingele izindlovu ezingama-385
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha Zokuhamba » Ukuzingelwa kwezindebe eBotswana kuzingele izindlovu ezingama-385
Izindaba Zezinhlangano • Izindaba ZaseBotswana • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Okungenani izindlovu ezingama-385 zazingelwa kulo nyaka owedlule, kepha uhulumeni waseBotswana usanda kumisa isilinganiso sonyaka sezindlovu ezingama-400 ukubulawa abazingeli bezindebe futhi uhlongoza ukuchibiyela uhlu lweCITES lwendlovu yase-Afrika ukuze kuvunyelwe ukuhweba ngezinyo lendlovu.
"Sekube nokwanda kokuzingelwa ngokungemthetho, lokho siyakuvuma", kusho uKitso Mokaila (uNgqongqoshe Wezemvelo Nezemvelo, Ukongiwa Kwezokuvakasha) kwinhlolokhono ye-CNN yakamuva. Kodwa-ke, uhulumeni akabonakali ewamukela ngokuphelele amazinga okuzingela amathuna manje iBotswana ebhekene nawo noma iqiniso lokuthi ukuzingelwa kwezindebe kuzokwandisa lokhu.
Ubufakazi bokukhuphuka cishe kuka-600% wezidumbu ezintsha zezindlovu, eziboshwe kakhulu ngo-2017-18, buthulwe ephepheni elibukeziwe lontanga “Ubufakazi Benkinga Yokukhula Kokuzingelwa Kwezindlovu eBotswana”, Eshicilelwe ephephabhukwini i-Current Biology.
Izidumbu eziningi zezindlovu zabantu abasolwa ngokuzingela ngokungemthetho ezitholakale ngesikhathi kwenziwa ucwaningo lwasemoyeni ngo-2018, ziqinisekiswe phansi nguDkt Mike Chase nethimba lakhe le-Elephants Without Borders (EWB) futhi bonke bakhombisa izimpawu ezesabekayo zokuzingelwa ngokungemthetho. Izingebhezi zabo zigawulwa ngamazembe ukuze kususwe izimpondo futhi izidumbu zabo ezicwiyiwe zimbozwe ngamagatsha ukuze zifihle ubufakazi. Ezinye izindlovu zaze zanqunywa nezinsipho zazo ukuze zikhubaze izilwane okusobala ukuthi zazisaphila ngenkathi abazingeli abazingela ngokungemthetho bekhipha izinyosi zabo.
Izinga lokuzingela ngokungemthetho elitholwe yi-EWB ngesikhathi benza ucwaningo lwasemoyeni likhathaza kakhulu. UChase (uMsunguli noMqondisi - i-EWB) uthe “ubufakazi obukuleli phepha abunakuphikwa futhi buyasisekela isixwayiso sethu sokuthi izinkunzi zezindlovu zibulawa yizigelekeqe ezazizingela ngokungemthetho eBotswana; sidinga ukubamisa ngaphambi kokuba babe nesibindi.
Zonke izindlovu ezizingeliwe ezitholwe nguChase nethimba lakhe bekuyinkunzi evuthiwe ephakathi kweminyaka yobudala engama-30-60 ubudala enamazinyo amakhulu abiza izinkulungwane eziningi zamaRandi emakethe emnyama.
Bobabili abazingeli abazingela ngokungemthetho kanye nezindebe banokukhetha okucacile kwezindlovu ezinkulu nezinkulu ezindala ezinamazinyo amakhulu, iningi lazo okuyizinkunzi ezindala kuneminyaka engama-35. Lezi zinkunzi zibaluleke ngendlela emangalisayo ku indwangu yomphakathi yabantu bezindlovu, ku- umkhakha wezithombe ze-safari kanye nokusimama kwesikhathi eside kwemboni yokuzingela izindebe uqobo.
Kodwa-ke, ingabe inani lokuzingela lezindlovu ezingama-400, elenziwa lukhuliswe yizinkunzi ezicijwe kakhulu, lihlala njalo?
Isibalo sezinkunzi esezivuthiwe eBotswana cishe singama-20,600 XNUMX, ngokusho kwe Ucwaningo lwasemoyeni lwe-EWB 2018. Okungcono, ama-6,000 alabo ayizinkunzi ezindala kuneminyaka engama-35.
Lapho uMongameli Mokgweetsi Masisi evula inkathi yokuzingela indebe, iBotswana ingahle ilahlekelwe yizinkunzi ezingama-785 kubo bobabili ukuzingela izindebe nokuzingela ngokungemthetho. Ngamanye amagama, ama-13% wezinkunzi esezivuthiwe futhi ikakhulukazi ezenza ucansi zizosuswa kubantu bezindlovu ngonyaka.
Abazingeli ngokwabo bakholelwa ukuthi inani elingu-0.35% wenani eliphelele labantu, noma cishe ama-7% ezinkunzi ezivuthiwe, yiwona "off-take" asimeme kakhulu ngaphandle kokulahlekelwa ngosayizi ofiseleka kakhulu wamazinyo. Kodwa-ke, lokhu akubheki okunye "ukuthatha" okwenziwe ngenxa yokuzingela ngokungemthetho, okwenza inani elikhona njengamanje eBotswana licishe liphindwe kabili leli zinga ”elizinzile”.
Noma amazinga okokuzingela ngokungemthetho engakhuphuki, kungathatha nje iminyaka engu-7-8 ukuqeda zonke izindlovu ezivuthiwe zezinkunzi, okusobala ukuthi akukho ndawo eseduze nokusimama.
Indawo yokwamukela izivakashi izokhuluma ngokushesha ukuthi ukuzingela ngokungemthetho kwenzeka ngoba ukuvunyelwa kokuzingela kwashiywa kushiywe. Kodwa-ke, ukuzingelwa ngokungekho emthethweni eBotswana kwaqala ukwanda ngesikhathi esithile ngonyaka we-2017, eminyakeni emithathu egcwele ngemuva kokumiswa kokuzingela.
Ukukhula kwenani labantu kunganciphisa lo mphumela, kepha kulezo zindawo lapho kwenzeka khona ukuzingela nokuzingela ngokungemthetho, inani lezinkunzi ezivuthiwe liyoncishiswa kakhulu, okuzoba nomthelela esakhiweni senhlalo salezo zindlovu.
UDkt Michelle Henley (Umqondisi, Umsunguli Wabahlanganyeli kanye noMcwaningi Oyinhloko - Izindlovu Eziphilayo) uthi "izinkunzi ezindala zinempumelelo ephezulu yobuzali, zikhuthaza ukubumbana kwamaqembu, zisebenza njengabeluleki emaqenjini ama-bachelor, futhi zivimbela imisipha yezinkunzi ezincane".
Lokhu okwedlule kubaluleke kakhulu, njengoba ukungabikho kwezinkunzi ezindala kusho ukuthi ingane encane ingena emsamu kusenesikhathi, okwenza ibe nolaka kakhulu. Lokhu kuhlukumezeka kungaholela ekwenyukeni kodweshu lwe-Human-Elephant, yona kanye le nto uhulumeni waseBotswana onethemba lokuthi uzolunciphisa ngokubuyisela ukuzingelwa kwezindebe.
“Ukukhetha ukuthatha isikhathi eside” kwamazinyo amakhulu kuthinta nokuhlukahluka kofuzo kwezindlovu, okuholela kubantu abanamazinyo amancane ngisho nezindlovu ezingenamandla. Lolu shintsho kwizakhi zofuzo aluthinti nje kuphela ukusinda kwalezi zindlovu isikhathi eside, kepha futhi lunemiphumela eqondile ekusimameni kwemboni yokuzingela indebe uqobo lwayo.
Ukubulawa kwezindlovu ngokungemthetho ngenxa yezinyo lendlovu kufinyelele emazingeni angenakubekwa e-Afrika yonkana, lapho inani lezindlovu ezibulewe ngokungemthetho manje lidlula ukuzala kwemvelo. Kulinganiselwa ukuthi indlovu eyodwa ibulawa njalo ngemizuzu engama-30.
Yize izindlovu sezibulewe ezindaweni eziningi zase-Afrika isikhathi esithile manje, inani lezindlovu zaseBotswana selizinzile kancane kancane kusukela ekuqaleni kuka-2010 linabantu abaphilile bezindlovu ezingaba ngu-126,000.
UChase uthe, “Nginesiqiniseko sokuthi bonke ababambiqhaza bangasebenzisana ukwenza izindlela ezidingekayo zokunqanda ukuzingelwa kwabantu ngokungemthetho. Ekugcineni iBotswana izokwahlulelwa hhayi ngokuba nenkinga yokuzingela ngokungemthetho, kodwa ngendlela ezobhekana ngayo nayo. ”
UMTHOMBO: Conservation Action Trust
I-Empire State Building Konke Kuhlotshiswe Ngamaholide